Mpitaritolona i Manandafy Rakotonirina. Isan’ireo lohandohany mpitarika tamin’ny hetsiky ny mpianatra 1972, toy izany koa tamin’ny tolom-bahoaka 1991, nitarihany Herivelona Ralaimongo.
Im-betsaka voasambotra i Manandafy Rakotonirina noho ny hevitra politika fijoroana na tamin'ny Repoblika Voalohany na tamin’ny Repoblika faharoa, izay nandefasana azy tany am-ponja, nisy fotoana natao tamin’ny toerana narahi-maso manokana toy ny tao Mantasoa tamin’ny andron’ny Haute Autorité de la Transition (HAT) rehefa nosamborina tao amin’ny hotely Carlton. Efa namela ireo nanenjika azy tamin'izany izy.
Maro ny andraikitra politika nosahaniny na teto an-toerana na teo amin’ny iraisam-pirenena ; santionany amin’ireo ny naha Mpikambana azy tao amin’ny FNDR (Front National pour la Défense de la Révolution), filoha mpiara-mitantana ny CRES (Comité du Redressement Economique et Social) niaraka tamin’ny Pastera Richard Mahitsison Andriamanjato, mpikambana CSR (Conseil Supérieur de la Révolution) tamin’ny Repoblika faha-2.
Notendrenin’i Marc Ravalomanana ho praiminisitra tamin’ny aprily 2009 i Manandafy Rakotonirina, raha sesitany tatsy Afrika Atsimo voalohany noho ny fanonganam-panjakana nisy teto Madagasikara.
Tao anatin’ny delegasiona Ankolafy Ravalomanana, nandray anjara tamin’ireo dinika famahana olana tamin’ny krizy 2009, nanomboka tatsy Maputo (Mozambika).
Mpampianatra tao amin’ny sekoly ambony Agronomie sy sampana Sôsiôlôjia teny Ankatso ihany koa i Manandafy Rakotonirina.
Nanana olana ara-pahasalamana i Manandafy Rakotonirina noho ny fahanterana, nanamarika izany ny tamin’ny aogositra 2015 ka voatery nanapahana ny tongony havana hatreo amin’ny fe, sy ny sasany tamin’ny rantsan-tongony.
Niavaka amin’ny loko mena sy mainty ary koa ny satroka « béret » mainty i Manandafy Rakotonirina.